Jabuuti (magaalo) - Gpedia, Your Encyclopedia
w:arz:Djibouti Jabuuti (Af Faransiis : Djibouti; Af carabi: جيبوتى) waa caasimada ah ee iyo dejinta ugu daawashada ah ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Dejinta ayaa waxaa la aasaasay 1888 by Faransiis ah, on dalka ijaaray Soomaali talada iyo Cafar oo kushiray. Intaa waxaa dheer, magaalada ay martigelisey tiro ka mid ah safaaradaha shisheeye, iyo waa xarunta ee ururada caalamiga ah oo badan, hay'adaha aan faa'iido-iyo shirkadaha. Jabuuti waa Jabuuti, sidoo kale waxaa loogu yeeraa Jabuuti, Carabi: مدينة جيبوتي, Faransiiska: Ville de Djibouti, Somaliya: Magaalada Jabuuti, Afar: Magaala Jabuuti) waa magaalo weyn oo magaalo weyn oo Jabuuti ah. Waxay ku taallaa gobolka xeebta Jabuuti ee Gacanka Tadjoura. Jabuuti waxay leedahay dad ku dhawaad ​​529,000 oo qof,  oo tiradoodu ka badan tahay 70% dadka dalka. Heshiiska waxaa la aasaasay sannadkii 1888 ee Faransiiska, dhulkuna wuxuu ka kireeyay soomaaliya iyo Afar Sultans. Intii lagu jiray muddadii ay jirtay, waxay u adeegtay caasimadda Faransiiska ee Somaliland iyo guusheedii Faransiiska ee Afarsadii iyo Issas. Waxaa loo yaqaan 'Pearl of the Gulf of Tadjoura' sababtoo ah halka uu ku yaal, Jabuuti waxaa loo qorsheynayaa meel u dhow maraakiibta maraakiibta ugu dhow ee caalamka, waxayna u shaqeeyaan sidii xarun dib-u-dejin iyo xarun. Dekedda Jabuuti waa dekedda ugu muhiimsan ee dekedda iyo dibadda laga keeno Itoobiya. Intaa waxaa dheer, magaaladu waa xarunta ugu weyn ee ururada caalamiga ah, kuwaas oo ah ururo aan faa'iido doon ahayn [taas oo] iyo shirkadaha. Garoonka Caalamiga ah ee Jabuuti-Ambouli waa madaarka ugu weyn ee gudaha, oo ku xiraya caasimadda meelo kala duwan oo caalami ah. Jabuuti waxay leedahay dhaqaalaha labaad ee ugu weyn ee magaalo kasta oo ku yaal Geeska Afrika ka dib markii Addis Ababa.
2 Gobolka Jabuuti
5 Cimilada Jabuuti (Magaalo)
6 Magaalooyinka La mataanoobay
Laga soo bilaabo 1862 ilaa 1894 oo dalka iyo ilaa xagga woqooyi ee Gacanka Tajuura, waxaa loo bixiyey Obokh. Waxa ayaamahan, maamulada deegaanka Soomaali iyo Cafar oo kushiray leh cidda France saxiixay cahdiyada kala duwan ee u dhexeeya 1883 iyo 1887 si ay marka hore bii ee gobolka. Marka Jarmalku France ee 1940, Jabuuti waxay noqotay Jarmalka oo gacanta ku Faransiis. Iyada oo ka jawaabeysa, Boqortooyada Ingiriiska xiran yihiin dekedda, laakiin ma aha in laga hortago kara degaanka ee Faransiis ka soo bixiya macluumaad ku saabsan ugudambeyn raxanta markabka. Bishii December 1942, oo ku saabsan 4,000 ciidamada British qabsadeen magaalada. Laga soo bilaabo 1862 ilaa 1894, dhulkii waqooyiga Gacanka Tadjoura waxaa loo yaqaan "Dhulka". Waxaa xukuma soomaali iyo Afar Sultans, masuuliyiinta maxaliga ah ee Faransiiska saxiixay heshiisyo kala duwan intii u dhaxeysay 1883 iyo 1887 si ay ugu horeyn u helaan meel dhexe oo gobolka ka mid ah   Masaajidka Al Sacada ee magaalada Jabuuti 1940-kii. Faransiiska ayaa markii dambe ka aasaasay Jabuuti 1888-kii, iyada oo aan horay loo xayirin xeebta. 1896-kii, degsiimada waxaa lagu sameeyey caasimadda Faransiiska ee Soomaaliland.  Magaaladan dambe ayaa si weyn ugu koray qiyaasta dhismaha tareenka Imperial Ethiopian Imperial. Waqtigaas waxaa jiray dad ka kooban 15,000 oo qof, oo ka badnaa dadweynaha magaalooyinka dhammaan deriska ee Itoobiya marka laga reebo Harar.  Inkasta oo shirkadda bilawga ah ay ku fashilantay ayna u baahnayd damaanad dowladeed si looga fogaado in ay hoos u dhacdo maamulka Ingiriiska,  Tareenka Franco-Ethiopian ayaa laftiisa guuleystay waxayna u oggolaatay ganacsiga magaalada Jabuuti in uu si dhakhso ah u daboolo ganacsiga hore ee xamuulka ah oo la socday oo u dhow Zeila ee British Somaliland.  Jabuuti waxay noqotay xarun laga dhoofiyo koonfurta Itoobiya iyo Ogaden, oo ay ku jirto ganacsiga Harari iyo Qaadka.  Ciidamadii Faransiiska ahaa ee soo degay 1935. Markii Jarmalku ku soo duulay Faransiiska sannadkii 1940, Jabuuti waxay hoos u dhigtay xukunkii Faransiiska ee Vicente Vichy. Jawaabtii, Boqortooyada Ingiriisku way xirtay dekedda, laakiin kama horjoogsan karto Faransiiska maxaliga ah inay bixiso macluumaadka ku saabsan gawaarida maraya. Bishii Disembar 1942, qiyaastii 4,000 oo Ingiriis ah waxay qabsadeen magaalada. Magaalada Jabuuti waxay ku dhawaad ​​22,046 deganayaasha. Dadweynaha Magaalada Jabuuti ayaa si dhaqso ah u kordhay, oo si rasmi ah uga soo kicitimay 17,000 qof 1947-kii ilaa 40,000 bilawgii 1960-kii, 62,000 oo ka mid ah 1967-kii, 118,000 oo ka mid ah 1972-kii ilaa 150,000 horaantii 1980-meeyadii. Ka dibna wuxuu noqday xarunta guud ee Faransiiska guulaysta ee Afarsooyinka iyo Issas. Tan iyo markii madax-bannaanidii 1977-kii, magaaladu waxay u adeegtay caasimadda iyo ganacsiga Jamhuuriyadda Jabuuti. Jabuuti waa magaalo-dhaqameedyo badan. Waxay leedahay dad ku dhawaad ​​529,000 oo qof oo deggan (Jabuutiyaanka), taas oo ka dhigaysa meel fog oo ka mid ah dejinta dalka.  Labada kooxood ee ugu weyn waa Soomaliga iyo Afar, kuwaas oo si caadi ah ugu xiran kooxda Hamitanka Naasiriyadeedka. Muuqaalka magaalo ee magaalada waxaa qaabeeya bulshooyin badan. Jabhadda Jabhadda Jabuuti waxay isbeddeshay 1990-yadii, markii tiro badan oo Itoobiyaan ah iyo muhaajiriin Soomaali ah ay yimaadeen magaalada, iyadoo Jabuuti lagu naanayso "Faransiiska Hong Kong ee Badda Cas" Inta badan dadka deegaanka waxay ku hadlaan Af-Soomaali (303,100 oo ku hadla) ama Afar (101,200 oo ku hadla) oo ah luqad kowaad, kuwaas oo ah afafka hooyo ee kooxaha qowmiyadaha Soomaalida iyo Afar. Labada luuqadoodba waxay leeyihiin qooyska Afroasiatic ee waaweyn. Waxaa jira laba luqadood oo rasmi ah oo Jabuuti ah: Carabi (Afroasiatic) iyo Faransiis (Indo-Yurub).  Carabi waa muhiimada bulshada, dhaqanka iyo diinta. Goobaha rasmiga ah, waxay ka kooban tahay Modern Arabic Carabi. Isku xirka, qiyaastii 40,000 oo deganayaasha maxaliga ahi waxay ku hadlaan luqadda Carabiga Carabta ee Taayiga-Aden, oo sidoo kale loo yaqaan Carabi Jabuuti. Faransiiska waxaa laga dhaxlay xilligii gumeysiga waana luuqadda koowaad ee barashada. Ku dhowaad 14,200 oo Jabuutiyaan ah ayaa ku hadla luqad ahaan. Afafka ajnebiga ah waxaa ka mid ah Omani Carabi (38,900 oo ku hadla), Amxaariga (1,400 oo ku hadla), Giriig (1,000 ku hadla) iyo Hindi (600 ku hadla).  Dadweynaha Jabuuti waa mid aad u badan Muslim. Islaamku waxa lagu arkay 94% dadweynaha waddanka (qiyaastii 740,000 tan iyo 2012), halka 6% oo ka mid ah dadka degan ay yihiin kuwo raacsan Christian. Jabhadda Jabuuti waxay u adeegtaa dadweynaha Kaniisadaha yar yar, oo ay ku qiyaasayaan tiradooda 7,000 qof sanadkii 2006. 
Cimilada Jabuuti (Magaalo)
Magaalooyinka La mataanoobay
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Jabuuti_(magaalo)&oldid=189437"